COVID-19 Warbixinta Bixiyaha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Gudiga Xaashida > COVID-19 Warbixinta Bixiyaha
COVID-19 Warbixinta Bixiyaha
La daabacay Sebtember 8th, 2021 in Gudiga Xaashida	by chpadmin
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Macluumaadka Washington ee ku saabsan COVID-19
Warbixinta Bixiyaha: Sebtember 8, 2021
Waxaan ku siinaynaa macluumaad adiga kugu saabsan oo ku saabsan shaqadaada CHPW agagaarka COVID-19. Fadlan la wadaag macluumaadkaan shaqaalahaaga caafimaad iyo maamulka, hadba sida loogu baahdo.
CHPW waxay diyaar u tahay inay kula shuraakowdo si kasta oo aan gargaar u noqon karno. Kaligaa ma tihid… Fadlan nala soo xiriir haddii aad wax ka fikirto.
MACLUUMAADKA CUSUB laga bilaabo 9/8/2021 (Macluumaadka waa la beddeli karaa)
Macluumaadka qaybtani waxay ka tarjumaysaa macluumaad cusub ama dib loo eegay tan iyo markii ugu dambaysay ee war-bixin taariikhi ah.
Maareynta Isticmaalka Medicaid
CHPW waxay bedeshay qaar ka mid ah hababka oggolaanshaha ee wax ku oolka ah 8/11/2021 si loogu taageero tas -hiilaadka inta lagu gudajiro arrimaha awoodda COVID ee hadda ka dhashay kala duwanaanshaha Delta:
10 -ka maalmood ee ugu horreeya joogitaan kasta oo SNF ah ayaa la oggolaan doonaa iyada oo aan dib -u -eegis lagu samayn si loo fududeeyo dheecaannada degdegga ah ee ka imanaya xarumaha degdegga ah. CHPW waxay aqbali doontaa ogeysiisyada dambe ee oggolaanshaha SNF, taas oo u oggolaan doonta tas -hiilaadka degdegga ah iyo SNF -yada inay isku -duwayaan wareejinta iyagoon ka sugin oggolaansho CHPW. CHPW weli waxay u baahan doontaa ogeysiis ka socda SNF marka xubinku qirto si aan u taageerno qorshaynta ka -bixidda iyo dib -u -eegis isku mar ah laga bilaabo maalinta 10 ee joogitaanka SNF.
CHPW waxay u oggolaan doontaa wareejinta dhinac ka socota xarun degdeg ah oo loo wareejinayo mid kale (illaa iyo inta daruuriga caafimaad weli laga soo buuxiyay xaruntii ugu horreysay ee degdegga ahayd) si wax looga qabto arrimaha awoodda. Oggolaanshaha xarunta bilowga ah waa inay weli oggolaataa CHPW waqtiga wareejinta. CHPW waxay u baahan tahay wargelin ka timaada xarunta aqbalaadda marka xubinku wareejiyo laakiin oggolaansho hore looma baahna si loo agaasimo wareejinta.
FIIRO GAAR AH: Isbeddeladani waxay dhaqan galayaan ilaa Noofambar 15, 2021. CHPW waxay dib u eegi doontaa kordhinta suurtagalka ah iyadoo ku xiran xaaladda COVID wakhtigaas.
➔ U soo degso Xogtan sida PDF ah
Wargeysyadii Hore ee COVID-19
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Sebtember 8, 2021